Kedu ka anyị ga - esi mee mgbanwe dị ukwuu ma ọ bụrụ na 99% anaghị adị ndụ? : Martin Vrijland
Kedu ka anyị ga - esi mee mgbanwe dị ukwuu ma ọ bụrụ na 99% anaghị adị ndụ?
gbara akwụkwọ IHE SIM	by Martin Vrijland	na 15 July 2019	• 32 Comments
Ugbua na ayi abiala na otutu ndi gbara ayi gburugburu bu ndi anumanu (lee isiokwu a), Ana m agwa gị ka ị chegharịa ọzọ banyere okwu ahụ. Ekwughị m na 'n'ikwu okwu' ma ọ bụ 'na ihe atụ', ọ bụghị ihe m pụtara. "Gaa ma mụbaaIhe a ma ama sitere na Baibul. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla, n'ihi na mbara ụwa a jupụtara na ndị ndụ na-adịghị ndụ-avatars na chọọchị emewo nnukwu onyinye na nke a. Mgbe a mụrụ nwa ma ọ bụ mmụọ nsọ, e nwere baptism nke ndị nne na nna na-enye akara nke avatar na chọọchị ahụ site na baptism mmiri n'ime isi (lee vidio n'okpuru). Nke ahụ bụ nlele mbụ nke ndị nlekọta na-ahụ maka ịchọta ma ọ bụrụ na nwa ọhụrụ amụrụ nwa ahụ dị ndụ.
Taa, Chọọchị Katọlik ka bụ ikike kachasị ukwuu n'ụwa; tinyere ndị na-ejikọta ya na ọbara ndị na-arụ ọrụ nchebe na akwukwọ: ụka site na uche ya na-achịkwa okpukpe na onye ụkọchukwu dị ka ndị isi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na azụmahịa zoro ezo n'azụ ochichi onye kwuo uche ya, ụlọ akụ na ọtụtụ ndị nwe obodo, nke ọbara ọbara ya na-achịkwa mkpanaka ahụ. Akwụkwọ edemede buru ibu na-agbaso mgbagwoju anya na polarity iji mee ka ọ dị ugbu a (dịka ihe ndị ọzọ na obere osisi ndị na-emepụta ugbu a). Dika umu mmadu na adighi anu aru (ihe di mfe n'usoro) nke na etinye onwe ha n'olu nke ike a, ihe kariri ya bu ijide onu ogugu nke 'nkpuru obi'.
In isiokwu a Akọwara m otú e si emepụta ụbụrụ mmadụ site na nwata. Biko gụọ akwụkwọ abụọ ahụ nke ọma tupu ịga n'ihu na-agụ ebe a. Ọ dị mkpa ka ị ghọta ụwa a na ụwa a maka ihe ọ bụ: a nyocha.
Ọ dịkwa mkpa ịhụ na (site na mmeputakwa) onwe-reproducing bio-avatars nwere ụdị ọgụgụ isi nke anyị ga-abawanye n'oge a. Ụbụrụ na-ahụ maka ahụ mmadụ (nke ụmụ mmadụ na-ahụ maka ọdịmma mmadụ) nwere ọgụgụ isi iji mụta ihe, soro nkuzi ọzụzụ, rụọ ọrụ, nwee egwu, ịgba egwu, na-ekiri ihe nkiri, na-aga ezumike ma na-enwe obi ụtọ. Otú ọ dị, ọ bụ nke ọgụgụ mmadụ AI (ọgụgụ isi). Ogologo ugbua a di ugbua ugbu a ka enwere ike ibanye n'uwa nke uzu, ya mere anyi puru ighota ya.
Ụnyaahụ ozi sitere na weebụsaịtị Zerohedge.com bụ nke a kọrọ na Facebook mepụtara AI nke nwere ike ịrụ ọrụ na PC dị mfe karịa kọmputa super mega si na Google Alphabet nke jisiri ike ịmụta ihe mgbagwoju anya Gaa na oge ọ bụla ma tie onye ọkpụkpọ kacha mma n'ụwa. Facebook mepụtara usoro AI (nke a na-akpọ Pluribus) nke jisiri ike tie ihe egwu 6 nnukwu oge ọ bụla. Nke a na-achọpụta ọtụtụ egwuregwu site na nrite mmeri. Egwuregwu dị ka Go bụ ihe dị mfe maka AI, n'agbanyeghị na enwere ike ijikọta ọnụ ụlọ karịa na ọnụọgụ dị n'ime ụwa (n'ihi na ozi niile dị ma ọ dịkarịa ala ịhụ). Nke a na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka AI ịzụ. Nke a dị iche iche maka poker, n'ihi na ị na-eme ihe na-adịghị mma nke ọtụtụ egwuregwu. Ya mere, Facebook kwadoro ịmepụta nkwupụta okwu a ụnyaahụ:
"Ọ dị mma ịsị na anyị nọ n'ọkwá dị elu nke mmadụ ma ọ gaghị agbanwe."
Anyị bụ 2019 na mmepe nke nkà na ụzụ na-aga n'ihu. Anyị na-aga n'ihu na-ebute ụwa a na-achịkwa ụwa, ma aghọtaghi na ha na-ewu otu n'ime otu. Anyị na-ebi ugbu a n'eziokwu na-eme ka ebumnobi nke igwe na onye wuru ngwongwo a na-agbalị imebi anyị n'ime 'ndụ ebighi ebi' site n'inye anyị nkwa nke ndụ ebighi ebi site na nsụgharị ụwa ma si otú a nye anyị ụdị nke AI na-arata. Nke ahụ bụ ndụ ebighị ebi dị ka a na-enye anyị site n'okpukpe na 'Messiah' ga-agbadata 'igwe ojii' ahụ. "Messiah" onye ga-araba anyị n'ime ụdị ụgha (ụgha) iji mee ka anyị ghara ịnwụ ọbụna n'ime AI ma si otú a jiri ike okike nke ihe ọkpụkpọ mbụ ahụ (onye ị ka nwere njikọ mkpụrụ ndụ ikuku) na quantum ubi (dika nje).
Ka o sina dị, ekele maka ihe ndị a na mpaghara nke AI, ọ na-akawanye mma ịghọta na avatar mmadụ bụ ikikere bio-avatar kwadoro na bio-brain nke na-arụ ọrụ nke ọma. Sayensị enweela ike ịmịpụta akụkụ sitere na ihe ọmụma ndị dị na steam na ndị a na-akpọ eto eto organoids nke a na-ewu ụdị 3D nke ụbụrụ. A na-ejikwa nlezianya na-atụgharị nyocha nke ọnọgụ na ndị mmadụ na-amalite ịghọta ọrụ nke ụbụrụ mmadụ. O siri ike na ụbụrụ anyị na-akpa àgwà dịka onye na-emepụta ihe ọmụma nke nwere ọgụgụ isi. N'oge na-adịghị anya, anyị nwekwara ike bipụta ụbụrụ ma jide n'aka na ọ bụ ụda kwesịrị ekwesị iji mee ihe omume AI chọrọ. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ibipụta avatars bio-robot. O doro anya na ihe ndị a dị na nkà na ụzụ na-ewere ọnọdụ dịka ịmebi nsogbu na nsogbu nke Alzheimer ma ọ bụ ịkwụsị usoro ịka nká, ma i nwere ike iche na e nwere 'mgbaru ọsọ' elu. Ọ dị mkpa ịghọta otú ụbụrụ si arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọ ụbụrụ n'igwe ojii ma ọ bụ mee mmelite na mgbanwe. Nke a metụtara ụdị biosystem mmadụ nile. Mmadụ-bio-robot na-edepụta usoro nke ya iji tọọ ntọala nke ga-ekwe omume 'upgrades' na akwụkwọ na-adịghị anwụ anwụ.
Ihe m na-ekwu bụ na ụmụ mmadụ na-abụrịrịrịrị ihe na-eme ka a na-ejide onwe ha na avatars. Nke a pụtara na e nyere ha usoro usoro ihe omume (DNA) site na usoro mmepụta ma nwee ike ịzụlite usoro nke isi nke AI na bio-brain site na nwata ruo usoro ọmụmụ ihe.
Ị na-ahọrọ avatar gị mgbe ị na-ekere òkè na nmepụta a; ihe anya gị na-ahụ mgbe ị na-ele anya n'enyo.
Ozugbo anyị chọpụtala na a na-ejikarị mpempe akwụkwọ a eme ihe na-adịghị ndụ (ma ọ bụ na-enweghị ike ọgụgụ isi na-ahụ maka ọdịdị nke ndụ-avatars) na okwu enweghị Playing Characters (NPCs), anyị nwekwara ike ịghọta na anyị ekwesịghị ịtụ anya ya site na ọha mmadụ . Atụla anya ka nnukwu ìgwè ndị na - emegide 'usoro' ma ọ bụ nchịkwa ikike ahụ. Nke a agaghị eme, n'ihi na eleghị anya, 99% anaghị adị ndụ. Ọ bụ ya mere ịdị ude nke mmata nwere ike iji site n'aka gị mgbe ị mesịrị hụ onye mmụọ nsọ n'ebe dị n'ụwa a. Ọ na-adị ụkọ. Ọ bụ ya mere ị pụrụ iji nọrọ naanị gị na ụwa a jupụtara na mmadụ. Ọ bụ ya mere ị nwere ike na-eche mgbe niile na ọrụ ndị mmadụ gbara gị gburugburu bụ ndị robots. Ihe niile dabara. Ị na-eche mgbe ụfọdụ ka a ghọtahiere gị? Nke ahụ dịkwa mma. Otu usoro AI anaghị esite na otu ihe okike 'singularity layer' na ị (nke dị na bọtịnụ nke avatar gị) si. Ọ bụ ya mere na ọ pụghị ịghọta gị ma ọlị.
Ị bụ okike na okike ma họrọ ịkere òkè na nmepụta a. Ọ bụ simulation virus iji nwalee ikike na-emepe emepe nke ụlọ ọrụ dị iche iche. Ihe dị iche iche nke okike bụ ihe mbụ na-egosi na ị na-anwale ma na-amata usoro nje virus maka ihe ọ bara uru. Ị nwere (iji aka ma ọ bụ n'amaghị ama) malitere isonye na simulation nke Lucifer, ma ị ka nwere ikike na njikwa onwe gị. Enweghị ihe mere ị ga-eji nọrọ naanị gị. Nke ahụ bụ akụkụ nke nrọ a na-eme nsị. A na-akwagharị gị. A ga-aghọgbu gị. Ị na-ahụ ọtụtụ nde, ọtụtụ nde ndị na-enweghị mmụọ (ndị na-adịghị achịkwa) AI avatars gburugburu gị. Ọmụmụ ihe onwe onye na-emepụta ihe ndị na-emepụta onwe ha bụ ndị nwere ike ịbụ ndị maara ihe, mana anaghị achịkwa ha na akpaaka mbụ. Ha agagh enwe ike ighota ihe banyere 'nkpuru obi' ma obu ume '; ndi ozo karia site na okwu ndi ozo sitere n'okpukpe. N'ọtụtụ n'ime ha, ha ga-enwe ike iji ya mee ihe site na ịmepụta simulation n'ime ngwegharị. Ọ naghị adị gị ka owu na-ama gị ma kwụsị ịda mbà n'obi. Enwere onye nọ na bọtịnụ nke nwere nyocha na nke ahụ. Atụla ụjọ: ọ nweghị ọnọdụ; ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweta ọnwụ anụ ahụ: ị ga-ahapụ ịme a.
Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịza ajụjụ site na aha: "Olee otu anyị ga - esi mee mgbanwe buru ibu ma ọ bụrụ na 99% anaghị adị ndụ?", Ana m akwado gị ka ị gụọ ihe ndị a 3 nke ọma na n'usoro oge:
E nwere ihe kpatara na mụ na gị ka na-ekpebi ịnọ ebe a. Ikekwe, anyị nwere ike ịkwụsị usoro nje ma ọ bụ ịmụta ya. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji nwee owu ọmụma, nanị, ịda mbà n'obi, mmechuihu, ma ọ bụ obi nkoropụ. Ụbụrụ gị na-eche na, n'ihi na ọ na-ele ndị niile na-egwu egwu (NPCs) gburugburu gị; NPC ndị na-apụ na-eloda ihe niile na-achọghị ma ghara imeri. Nke ahụ bụ mgbochi nke na-eme ka ị gbanwee. Tụkwasị ike nke okike (na mweghachi) nke ihe mbụ ị na-emepụta (lee isiokwu mbụ site na listi).
Ihe ndekọ njikọ njikọ: zerohedge.com, theguardian.com
Akụkụ ndị e depụtara site n'aka DNA nke onwe ahụ bụ eziokwu: lee ebe 3D mbụ bu n'obi
Tags: ai, Avatar, n'ike mmụọ nsọ, bio avatar, ụbụrụ, Facebook, agba, ọgụgụ isi, akụrụ, Ndị nwoke, ejideghị ya, adịghị ndụ, organoids, Pluribus, igwe, zielen
Marga dere, sị:
15 July 2019 na 06: 33
Ihe ị na-ede bụ ihe a na-enyocha m, ọ fọrọ nke nta ka m na-ebe ákwá, ọ bụ mgbe niile ka enwere m nghọtahie, n'adịghị ka ndị ọzọ, mgbe ụfọdụ enwekwaghị m, n'ihi na enweghi m ike ịghọta na ọtụtụ mmadụ nwere ụma ọghọm, ndị na-emeghị ihe ọ bụla ma na-emetụtaghị ha ma na-eme ihe niile, ebe m na-enweghị ike ịme ya.
Enwere m ihe ọ bụla m na-ekwu, chere, nke ọtụtụ ndị (enweghị mkpụrụ obi) masịrị ya, n'ihi na a na-anabata ya ma ọ gaghị ekwe omume, n'ezie ha kpọrọ gị ka ị 'nye iwu', na-enwe olileanya na ị mgbe ahụ ọzọ na-agbanyeghị n'ahịrị, ọ na-esiri m nsogbu mgbe niile.
Nne m na-ekwu otu ugboro: lee ka isi ike, isi ike na nnupụisi si kwuo, sị: ọ bụrụ na m na-anọkarị n'oge gara aga.
Onye ọ bụla nọ n'ọrụ mbụ m gwara m: Ị dị ọcha, ma emesịa m malitere iche banyere ya, n'ihi na achọpụtara m na ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ adịghị.
N'uzo m eguzogidere, n'etiti ihe ndi ozo megide iwu na iwu ndi mmadu na-adighi obi ojoo nke m huru na ndu m, n'ezie enwere m ntaramahuhu maka nke a, ma enweghm ike inye aka ma obu onwe m, anaghi m akwa mmakwaara .
Ụwa m dị obere na mmadụ ole na ole na-emegharị ndụ, ma ọ bụghị na ọ bụghị na Social Media, anaghị m votu na ha na-anọpụ n'arịa m.
15 July 2019 na 10: 26
Nke ahụ dị mma ịnụ. Ma ugbu a na ị maara nke a, oge eruola 'ịghara iji oge gị ebe a,' kama jiri njikọ gị na mbụ gị n'ụzọ bara uru. Ị nọ ebe a iji kpochapụ usoro nje ahụ ma jiri ike ike gị kee ihe.
Ị nwere ike ịmalite inwe mmetụta nke ịda mbà na ụbụrụ avatar gị (ma eleghị anya / ikekwe) n'ihi mmechuihu site na ndị niile gbara gburugburu avatars gbara gị gburugburu. Ị dị oke ma ị nwere ike ịmalite.
15 July 2019 na 12: 57
Nzaghachi dị mma n'aka gị ma dị mma ka ị biputere ya. Ọ ga-amasị m ịhụ mmeghachi omume site n'aka ndị ọzọ chọrọ ịkọrọ ahụmahụ onwe ha.
Ntinye dere, sị:
15 July 2019 na 08: 57
Ihe mara mma nke ozo .. Ma n'eziokwu n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na m na-arụ ọrụ naanị n'ime ọha mmadụ a, ọ dịghị mgbe m na-enwe owu ọmụma n'ihi njikọ dị elu nke m onwe m. Nke ahụ na-enye euphoria kama ịnọ naanị ma ọ bụ ịda mbà n'obi. Ọ dị ezigbo mma!
Ajuju o bula .. Gini ka onye nchu aja ahu na-anwale ma nwa a bu onye ndu bu ee ma o bughi? Kedu ka m ga-esi hụ ma ọ dị onye mmụọ nsọ ma ọ bụ na ọ bụghị? Ma ọ bụ na ọ ga-ekwe omume na iko ndị pụrụ iche dịka na fim "Ha Na-ebi Ndụ"? 😉
Ma n'ihi nkwupụta gị na enwere ike ịhapụ gị mgbe ị na-ezute onye na-ahụ ndụ, ị na-emepụta echiche na ị chọghị iko ndị ahụ? Ọ ga-amasị m ịmara otú ị si amata nke a?
Daalụ n'ọdịnihu ..
15 July 2019 na 10: 02
Ọ bụrụ na ndị ụkọchukwu bụ ndị nnabata nke onye na-arụ ọrụ (ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ) na - achịkwa - nke a na - akpọkwa arvhontic control - mgbe ahụ, ha bụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, iko ndị Lucifer na mgbagharị a.
15 July 2019 na 10: 04
Kedu ka ị si mara ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike mmụọ nsọ? Ị mara nke ahụ. Ị na-azụlite uche ahụ ma ọ bụ (kama) ị nwere ya site na ịmụ nwa.
15 July 2019 na 11: 45
Nke ahụ dị mma. Ya mere mgbe ị na-eje ije n'okporo ámá ị na-agwa onwe gị; "Ọ bụ ịma jijiji na ọ bụghị"?
O di nwute na enweghị m ike ime nke a ...
15 July 2019 na 11: 58
Maka ụfọdụ, radar a na-ahụkarị dị ntakịrị ma ọ bụ na ejighị ya (iwepụ ya site na ihe omume). Ghichaa jụụ ma gee mkpụrụ obi gị na njikọ mbụ gị.
15 July 2019 na 12: 12
Mana ịza ajụjụ gị:
Ee, nke ahụ bụ otú o si arụ ọrụ. Iji mee ihe n'eziokwu, ọ bụ kama nke a. Ọ dị ugbu a ka ọhụụ ịhụ ndị mmadụ na-agafe agafe na ọ bụ ihe a na-ahụkarị mgbe mmadụ ji mmụọ nsọ dee ya.
15 July 2019 na 13: 23
Ma eleghị anya ha dị oke ụkọ na anaghị m adaba n'ime ha. Ka ọ dị ugbu a, achọrọ m oge tupu m nwee ike ịkwado onye dịka "onye a na-egbochighị." Enwere m olileanya na n'ọdịnihu m ga - Anya nke anya nwere ike ime .. 😉
M PFC na Amygdala dere, sị:
16 July 2019 na 12: 20
Karịa 80% nke ndị mmadụ na-arụ ọrụ 'ụwa' nke taa n'ime ụzọ akụkụkụ. Ha na-ejide onwe ha site n'ibi 'mpaghara' nkasi obi ha, ọnọdụ dị mma na ụbụrụ ha. Akwụsịla ha na njikọ anụ ahụ na 'okike', eluigwe na ala, obi ha ... Ọ naghịzi ebute site n'ike mmụọ nsọ mbụ ... N'ọtụtụ ọnọdụ a na-agba akwụkwọ a n'enweghị ihe ọ bụla ...
16 July 2019 na 12: 37
Omuma na eluigwe na ụwa bụ akụkụ nke nkedo. Ọ dị mkpa ịhụ na nke ahụ. Ya mere, ị ghaghị ịmaliteghachi onwe gị, ma iji hụ na, ọ bara uru iji ghọta ihe dị mkpa nke isiokwu ndị a.
15 July 2019 na 12: 06
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-adịghị ndụ na-achịkwa ọtụtụ afọ site na nchịkwa ịchịkwa ihe omume dịka okpukpe na mmemme site n'ụdị ụzọ ntanetị (TV, mgbasa ozi ọha na eze, wdg). N'ọdịnihu dị nso, interface ụbụrụ ụbụrụ ga-achịkwa ọtụtụ mmadụ ọbụna karị karị, na-eme ka onye mmụọ nsọ rata. Ọ dị mkpa izere mmetụta ndị ahụ niile dị na ụbụrụ na ụbụrụ dị ka o kwere mee.
kc2211 dere, sị:
15 July 2019 na 17: 11
Ị chere na ndị mmadụ na-adịghị ndụ nwere ike ịmalite mmụọ nsọ, ọ bụ na ha nile sitere n'ike mmụọ nsọ? Ma ọ bụ, ọ bụ mmadụ niile na-abịa n'ụwa?
15 July 2019 na 18: 38
Ọ bụrụ na ị gụọ ihe gbasara 3 na ihe ndị edere n'isiokwu ị ga-ahụ nke ahụ n'echiche m na ọ bụghị ya.
Ọ bụghị onye ọ bụla a mụrụ ka e si n'ike mmụọ nsọ dee. Ị na-ahọrọ avatar gị na egwuregwu ahụ: a ga-amụ ya n'ike mmụọ nsọ. Ndị fọdụrụ na-agba ọsọ na AI (akpọkwa ego ahụ).
Rịba ama: avatar nke a na-achịkwa n'èzí (ma ọ bụ site na gị dị ka "onye ọkpụkpọ" ma ọ bụ site na otu njikwa) nwekwara usoro AI (ego). Nke a nwere ike ime ka eserese na-eleghara njikwa ya na-apụ apụ (nke bụ isi ihe na-esi na mmemme site na nwata ruo n'ili).
15 July 2019 na 21: 02
Enwere nani otu ụzọ isi gbadaa na nke ahụ dị. Mgbe m banyere n'ime obodo otu ụbọchị, ihe nrịba ahụ niile na-eme ka m bụrụ onye nzuzu. N'ebe nile ndi mmadu na-eje ije n'inye t-shirts na ofufe Saturn ma obu ihe omimi. Ndị egwú na ndị ọkachamara a ma ama na-akwalite ha maka ihe kpatara ya. Enwere ya na akpaghị aka, n'enweghị obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ. Ị na-anụ ma hụ ya n'ebe niile, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ebe dị anya na obodo. Anyị ga-anọ ebe ahụ iji mee ka onwe anyị dị ọcha, mkpụrụ obi m maara nke ahụ.
16 July 2019 na 13: 47
Naanị m mụtara site na Martin na "ọdịdị na eluigwe na ala bụ akụkụ nke nkocha. Ọ dị mkpa ịhụ na nke ahụ. Ya mere, ị ghaghị ịmaliteghachi onwe gị, ma iji hụ nke ahụ, ọ bara uru iji ghọta ihe bụ isi nke isiokwu ndị a. " Nanị ka m debanyere saịtị a. Aga m gụọ isiokwu dị iche iche na nke a tupu mụ anọgide na-ejupụta na nrọ m nke 'ịmụrụ anya'.
16 July 2019 na 20: 14
Agụkwara m ya. Kedu mgbe ị chere na ị nwere ike ịchọta onwe gị? Ọ bụrụ na ị nọ gburugburu nrụgide na ala ala ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-ege ntị na oge 432hz.
O doro anya na okike bụ akụkụ nke nmegharị a, mana nke a bụ otu nke ejirila ọtụtụ ugboro. Ị nwere ike ịchọta oyi akwa mbụ site na ịchọta ebe kwesịrị ekwesị n'ime onwe gị!
Ọ naghị adị na mbụ nke matriks nke mbụ na nri dị oke mkpa anyị ga-eri iji nweta ndụ. Nke ahụ bụ uzo iji kwalite ngwọta a.
ion dere, sị:
17 July 2019 na 12: 35
Ihe ngwọta yiri ka ọ bụ "ọbara na ebumnuche" (google ma ọ bụ ịchọ na youtube) nkwupụta iji wepu karma ọjọọ ị na-amalite ịlọ ụwa. Ọbara dị ike, a pụkwara iji ma ihe ọma ma ihe ọjọọ. Ị ghọọ otu n'ime 144000 (Akwụkwọ Nsọ) ma nwee ike ịlaghachi na mbụ gị ma ọ bụrụ na ị "anwụ" (ọ bụghị azụ na kọmputa nje) Na-eche ma ọ bụrụ na Martin enyochala nke a ma nwee ike ịbanye n'ime ya ma dee ya.
17 July 2019 na 16: 18
Ọ bụrụ na simulator nke ụwa a na-agba ọsọ n'ime ntughari dị iche, na "simulation dị elu" (nke ọ na-agba) ị nwere ike iduhie onye ọkpụkpọ ahụ nhọrọ nhọrọ ịlọ ụwa, n'ihi na ọ maghị na nke ahụ bụkwa akụkụ nke nko (ka anyị kwuo ya) kpọọ ya "nyocha ime ụlọ nkwụsị").
Na nkenke: ịkwesighi ịgha ụwa. Naanị ị ga-anọgide na-echeta na ị na-ebugharị site na nkedo na na ị na-elekwasị anya na ụdị mbido mbụ gị (nke mbụ nụ nke na-abịa site na "eriri cell") nke nwere ọrụ okike.
Ma mgbe ahụ, anyị chere na akụkọ ndị ahụ na-alọgharị azụ bụ eziokwu. Ọ dịtụla mgbe anyị hụrụ ihe siri ike maka nke a?
17 July 2019 na 18: 37
Ihe siri ike siri ike ịjụ. Amaara m prọfesọ, ọkachamara gbasara ọrịa uche, Ian Stevenson emeela nnyocha miri emi ma dị omimi banyere nlọghachi azụ, karịsịa na ụmụ nwere ike icheta ndụ gara aga, na nkọwa. Ihe ndị na-akpali mmasị, akara omumu na ọmụmụ nwa nwere nnukwu ọrụ na nke a.
17 July 2019 na 20: 38
cheta akụkọ banyere nwa nwoke Siria nke mara onye na-egbu ya (na ndụ gara aga) ma nwee ike ịchọta ọnọdụ onye ozu ahụ.
17 July 2019 na 20: 39
A pụrụ ịkọwa ha nke a ma ọ bụrụ na ị na-ahụ site na nṅomi ngwusi.
18 July 2019 na 18: 49
@Martin, ị nwere ike ịchọpụta nkwupụta ahụ?
N'ihe banyere ihe akaebe na-egosi na @Zonnetje na @ZandinOgen nọ, yana ihe akaebe nke ndị nyocha na-akọ banyere ezumike nká nke ndị mmadụ nwere 'ihe nwụrụ anwụ' nwere ike (mgbe a na-agwọ ọrịa) na-ekwu ihe ndị dọkịta na-awa ahụ kwuru na lọ ọrụ ahụ na otu dọkịta na - awa ahụ na - akwado na mgbe emechara (ha kwuru nke ahụ), gịnị ka nke ahụ nwere gbasara na ịme anwansị?
18 July 2019 na 19: 04
Ọ dị mma, mgbe ị gụsịrị mmeghachi omume mbụ gị na 'ọbara over ebumnuche' (ihe nzuzu) ọzọ, ị pụtara na mgbe ọnwụ gị gasịrị ị ga-abanye na 'ịme ụlọ na-eche' ma ọ bụrụ na i mee mkpebi na-ezighi ezi ebe ahụ, ị ​​ọzọ na-alọ ụwa.
Nke ahụ anaghị agbanwe eziokwu ahụ bụ na enwere ọtụtụ ihe aka ike (siri ike) na carnaite dị ọcha na-ewere ọnọdụ n'ezie, ọ bụghị ya?
18 July 2019 na 20: 22
Akụkọ abughi ezigbo ihe akaebe. Ha bụ akụkọ.
18 July 2019 na 21: 02
Okwu banyere ịgba ama n'ụlọ ikpe bụkwa akụkọ ..
18 July 2019 na 21: 09
Ikekwe nke ahụ bụ ihe ọ bụ .. Ewezuga ma enwere ọtụtụ ndị akaebe na-ekwupụta otu ihe ahụ .. Mgbe ahụ onye ọka ikpe na-enye uru nke obi abụọ ..; )
18 July 2019 na 21: 42
N'ọnọdụ a, mụ onwe m bụ onye ikpe ..
20 July 2019 na 02: 04
100% bụ n'ezie ịlọ ụwa. Mgbe ị na-eteta n'ụra, mkpụrụ obi gị bụ onye ahụ. Ihe bụ nsogbu bụ na anyị enweghịzi ike icheta akụkọ ihe mere eme anyị. Ekwetaghị m na oge ma kwere na mkpụrụ obi nwere ike ịbanye na akụkọ ihe mere eme. Ekwenyere m na mmepe mkpụrụ obi, n'oge ahụ ị ga - achọpụta na ịnweghịzi ihe ọ bụla ịchọrọ na ọkwa dị ala. Oge ahụ erutewo, ị nwere ike ikpokọta ọtụtụ ozi ugbu a iji gbapụ. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ nke duhiere na ọkwa dị n'ụwa ebe a pere mpe. Cheedị ma ọ bụrụ na iteta n'ụra ebe ị nwere ike iji nkuzi niile ị chọpụtarala na ọkwa a. Mgbe ahụ ị chọghị ịda maka ya ọzọ. Martin chọrọ ime ka nke ahụ pụta ìhè, ekwela ka ọnwụnwa nke nkà na ụzụ nwaa gị ọnwụnwa, n'ihi na anyị anabatala nke a. Ezigbo ihe omuma nke nkpuru obi a achi ochi ka anyi mee otu ihe a ozo.
Ọ bụ ya mere ịlọ ụwa n'ọkwa a abụghị ihe ngwọta ma nke ahụ bụ nsogbu kachasị mkpa anyị kwesịrị idozi.
20 July 2019 na 08: 30
Okwu ọma. Gini: mara na ikwesighi ịlaghachi.
Live bi n'etiti ọtụtụ ndị adịghị ndụ, ndị nọ ebe ahụ, ga - akpali gị itinye aka na sistemụ ma mee ka ahụ gwụ gị ike ma ọ bụrụ na "adahie".
Bịanụ ka ị chọpụta na ị na-ebi n’ime ịme anwansị. Biko mara! Ihe dị mkpa: mgbakwunye nje Luciferian bu n’uche ibute mmalite nke ịdị adị niile. Ọ bụrụ n’ịchọpụta na mmụọ gị (nke na - esite na stem cell nke ihe niile bụ) bụ ihe okike dị, ma ị ga - achọpụta na ị ga - agbagha onye zụrụ usoro nje a yana sistemụ nje. Nke a agaghị ekwe omume na ọkwa SIMS nke a (bioatar avatar), mana ị ga - eme nke ahụ na ọkwa gị. Ejikwala ụdị onwe gị nke ọma. Ọ bụ naanị "ụwa nrọ". Really nọghị ebe a n'ezie, ị na-ekiri (ma na-egwu egwu) na ịme anwansị.
20 July 2019 na 10: 26
@guppy okwu gi kwenyere na m na-elele eziokwu a mere eme. Site na mgbe m bụ nwata, enwere m omume ilere anya mgbe niile, n'amaghị ama, amaara m na ọ dị ihe ekwekọghị n'uche m na-ele simu ahụ nke a na-ejide anyị. Enwetaghị m echiche na-enweghị nkịta, echewo m mgbe niile ihe kpatara ya, na omume imeghe eziokwu bụ njirimara agwa ị ga-enwerịrị. Ekwesịrị ịgba ụmụaka ume ka iche echiche nke ọma ma jụọ ajụjụ a kpatara ajụjụ a, mee ka ịmata ihe, bido nchọta .. Anyị bịara ebe a ka anyị tolite mmụọ, inwe ahụmịhe na ịchọta ụzọ anyị ga-esi ghara ịdaba n'ọnyà ahụ. anyi laghachite na uwa nile. Ndị na-eche ọnụ ụzọ nke eziokwu a maara maka edemede ahụ ma na-anwa ịwụnye mkpọchi teknụzụ na ụzọ.
" Q Anon, ihe ngosi nke Epstein, njikọ Clinton, 'obodo eziokwu': ọ ka ga-adị mma!
MH17 ikuku mmiri: gịnị ọzọ ka anyị nwere ike ikwere? »
Nleta nile: 11.555.743
Ihe kpatara transgender ji bụrụ iwu ọhụụ maka narị afọ 21 na heterosexual na-apụ n'anya
Jeffrey Epstein gburu onwe ya n’ụlọ mkpọrọ (mmelite)
Nkwalite: n'efu na ezumike ya na Martin Vrijland
Danny op Kedu ka 5G siri dị ize ndụ yana otu esi etinye ya na nzuzo
Martin Vrijland op Egwurugwu na-anọchi anya okpukpe okpukpe na-anụ ọkụ n'obi ebe ndị na-akwado ya na-eche na ha na-alụ ọgụ maka 'iche iche na nsonye'
guppy op Kedu ka 5G siri dị ize ndụ yana otu esi etinye ya na nzuzo
Jikọọ ndị 1.613 ndị ọzọ debanyere aha